Home Wararka Maanta Villa Somalia oo wado qorshe ka dhan ah kuraasta taala Garbahaareey kadib...
Villa Somalia oo wado qorshe ka dhan ah kuraasta taala Garbahaareey kadib baraaruga Axmad Madoobe
Khilaafka DG Jubbaland & Maamulka garabka ka helaya Villa Somalia ee la xiriira hab maamulka Gobolka Gedo ayaa soo jiitamayay tan iyo 2018kii, marba heer ayuu soo gaaray, kulan weliba oo looga hadlayay arrimaha Doorashooyinka waxaa miiska saarnaa doodda kuraasta taalla Garbahaarey.
Villa Soomaaliya oo ciidan badan geysay Gobolka Gedo ayaa culeys kaddib waxa ay ku guuleysatay in maamulka DG Jubbaland u xilsaaran Gobolkaas iyo degmooyinka gacantooda ka baxay in uu dulsaar ku ahaado Magaalada Kismaayo.
Ujeedka ugu weyn ee Villa Somalia xoog & Xeeladba isugu geysay Gobolka Gedo ayaa ah in ay boobto 16 kamid ah 43-da kursi ee Saami ahaanta loo siiyay Jubbaland, si ay ugu soo baxaan Xildhibaanno codadkooda ay ku tashaneyso Madaxtooyada Soomaaliya.
Heshiisyadii Doorashooyinka ee 17 Sept 2020, 27 May 2021, 1dii October 2021, 9kii Janaayo 2022 iyo kulamadii looga dooday Doorashada waxaa la isku afgartay in Dowlad Gobaleedka Jubbaland loo daayo hab maamulka Doorasho ee Garbahareey, lana geeyo mas’uuliyiinta dulsaarka ku ah Kismaayo.
Madaxtooyada Soomaaliya oo u xusul duubeysa kuraastaan ayaa Muqdisho ku xayirtay Maamulkii ay u magacawday Gobolka Gedo una adeegsatay in uu meesha uga saaro mas’uuliyiinta DG Jubbaland ee Gobolkaas.
Khilaafka ayaa soo cusboonaaday kaddib markii Kismaayo ay ku kulmeen Siyaasiyiin iyo mas’uuliyiin xubno ka ah Jubbaland oo kasoo jeeda Gobolka Gedo kuwaas oo si cad u sheegay in aanay suuragal ahayn in doorasho xor iyo xalaal ah lagu qabto Garbahaarey.
Maamulka Gobolka Gedo ee Villa Soomaaliya garabka ka heysta ayaa gaashaanka ku dhuftay hadalkaas, waxaana uu sheegay in Doorashada 16ka kursi ay ka dhaceyso Magaalada Garbahaarey lana diyaariyay qorshihii lagu qaban lahaa.
Dowlad Gobaleedka Jubbaland ayaa ku doodeysaa in gacantooda uu ka maqan yahay Maamulka Gobolka Gedo, taasina aanay gelineen kalsooni buuxda oo ah Garbahaarey lagu qabto Doorasho Xor iyo xalaal ah kana maran gacan-togaaleen.
Kismaayo iyo Garbahaarey waa labada Magaalo ee lagu karkarinayo siyaasadaha iska soo horjeeda oo gunteedu tahay 16ka kursi ee Golaha Shacabka, taasi waxa ay dhalisay gaabis ku yimid dardargelinta Doorashada oo 10 cisho keliya ay ka dhiman tahay waqtiga lagu ballamay.